Lacag laga Xaday Bankiga Dhexe ee Soomaaliya - Radio Risaala: Somali News Online
Home XULKA WARARKA Lacag laga Xaday Bankiga Dhexe ee Soomaaliya
Lacag laga Xaday Bankiga Dhexe ee Soomaaliya
Guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Mudane Bashiir Ciise Cali, ayaa xaqiijiyay in lacag dhan Shan boqol iyo Soddon Kun oo Doollarka Maraykanka ah, $ 530,000 in laga xaday Bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Guddoomiyaha ayaa intaa ku daray inay haatan socdaan baaritaanno lagu ogaanaya sidee loo Xaday iyo sidoo kale cidii dhacday.
Guddoomiyaha ayaa sheegay inuu falkaasi uu ka dambeeyay mid ka mid ah Qasnajiyada Bankiga,kaasoo muddo Bil ah soo dhigayay Lacago Been abuur ah,dabeetana kala baxayay midda rasmiga ah ee halkaasi taalla,wuxuuna intaa raaciyay inuu shaqsigan baxsaday laguna raadjooga,
Guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Mudane Bashiir Ciise Cali, ayaa sheegay in sharciga la la tiigsan doono cidii lagu helo in ay xaday lacagtaasi.
Previous articleMadaxweynaha oo ka qeybgaley aas qaran oo loo sameeyay S/Guud Maxamed Cali Samatar+Sawirro
Next articleDHAGEYSO: Madaxweynaha” Samatar waxa uu ahaa Mas’uul Qaran”
XOGTA DAHSOON:Sidee loola dhaqmaa qofka qaldama?
Sawiro: Shil khasaare geystay oo ka dhacay Muqdisho.
DAAWO:-Maxaa ka jira in Xeebta liido laga helay Kalluun la sumeeyay ?
Daawo:-Qeybta 1aad dhacdooyinkii Siyaasadeed ee ka dhacay dalka 2019
DAAWO:-Saameyn ka dhalatay xayiraadda la saaray Kismaayo (WARBIXIN)
Kulan looga hadlayay Arrimaha doorashooyinka oo lagu qabtay Jowhar
Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa Magaalada Jowhar ku qabtay kulan balaaran oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee Bulshada reer Jowhar...